Ogaden News Agency (ONA) – Isku-dayga shirkada Shiinaha ee shidaal baadhista oo lagu horjoogo Babri-Bayax
Isku-dayga shirkada Shiinaha ee shidaal baadhista oo lagu horjoogo Babri-Bayax
18ki Bishan ayaa wuxuu dagaal adag ka dhacay meesha lagu magacaabo Ciinley, kolkaasoo ay CWXO weerar laxaad leh ku qaadeen askarta Wayaanaha ah ee waardiyaysa shirkada Shiinaha ee leh waxaan baadhaynaa shidaalka Ogadenya. Dagaalka oo mudo socday ayaa ciidankii cadawga waxaa dib loogu soo celiyay saldhigii shirkadda iyagoo la soo baqday shaqaalihii Shiinaha oo loo sii qixiyay Q/bayax.
Asakar kor u dhaaftay 50 askari ayaa la warinayaa inay kaga dhinteen goobtii uu dagaalka ka dhacay halka uu uga dhaawacmay tobanaan kale iyagoo aad loo soo eryaday.
Muddo sadex maalmood ah ayaan wax shaqa ah laga qabanin iyagoo ku gabanayey Qabri-bayax, inkastoo la soo sheegayo inay markale goobihii ku soo noqdeen, waxaana la filahayaa inuu dagaal kale ka qarxo aaggaas maalmahan, haduusan bilabaninba maanta iyada oo la is hor fadhiyo.
Dhanka kale waxay isla maalinkaa 18ka Sep 2011 ku dileen Ciinley nin shacab ah oo La yidhaahdo Haybe Cali, sida oo kale waxay ku dileen Araarso Nin shacab ah oo lugu magacaabo Ina Cabdinuur Janno-gale, isla maalinkaas ayay waxay magaalada Tusmo ku dileen nin shacab ah oo lagu magacaabo Maxamed dheere.
Wixii ka soo kordha dagaaladan gadaal ayaan idinkala soo socodsiin doonaa.
shiinaha dadkii baa ka batay marka waxaan u malayn inuu rabo in la laayo qaarba meel intuu u diro meelaha halista ah sida ogadenia oo kale . waa dad uu oogu tala galay baan u malayn inaysan soo noqonin . wuu ogyahay shidaal aan dadka leh la waydiisanin in aan la iska soo saaran karin ee danta uu leeyahay waxaan ku tilmaami karnaa uun inuu dadki ka tan batay . marka dadka la iskama layn karo uun ee waa inaa sabab loo yeelaa oo meelo khatar ah loo diraa si ay u soo dhintaan